साउदी र कतारमा सातामै ८४४ नेपाली संक्रमित
पछिल्लो एक सातामा प्रमुख श्रम गन्तव्यमा कार्यरत थप १ हजार नेपालीमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण भएको पाइएको छ । विगत एक सातामा साउदी अरेबिया र कतारमा मात्र थप ८४४ नेपालीमा संक्रमण भएको पाईएको छ ।
नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य कतार, मलेसिया, साउदी अरब, यूएई, बहराइन, पोर्चुगल र कुवेतमा कार्यरत अन्य १ हजार नेपाली श्रमिकमा संक्रमण देखिएको छ । यी श्रम गन्तव्यमामात्र हाल १५ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सार्वजनिक गरेका रिपोर्टमा उल्लेख छ । एक साताभित्र कतारमा २००, बहराइनमा ६६, यूएईमा ५१, कुवेतमा ४, साउदी अरबमा ६४४, पोर्चुगलमा ३ र माल्दिभ्समा ८ नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । श्रम गन्तव्यमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको रेमिटयान्स र अन्तरिक रोजगारीमा देखिने विज्ञले बताएका छन् । विगत एक सातामा कतारमा २०० र साउदी अरबमा ६४४ नेपालीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । यसैगरी विगत एक सातामा ७ नेपाली श्रमिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ ।
विदेशमा कोरोना संक्रमित नेपालीमध्ये आधाभन्दा बढी प्रमुख श्रम गन्तव्यमा कार्यरत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्वभर कोरोनाबाट संक्रमित नेपालीमध्ये लगभग ६० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कार्यरत मुलुककमा देखिएको छ । विश्वभर ६ हजार ७ सय ८१ नेपालीहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएकामध्ये रोजगार गन्तव्यमा मात्र ४ हजारको हाराहारीमा श्रमिक संक्रमित छन् । विश्वका अन्य देशमध्ये खाडी मुलुक, मलेसिया, पोर्चुगल, बेल्जियम, जापान, साईप्रस, माल्दिभ्स, माल्टा, हङकङमा रहेका लगभग ४ हजार नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ । यी देशमा नेपालबाट वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।
हालसम्म कतारमा २ हजार ५ सय, बहराइनमा ३००, यूएईमा २००, कुवेतमा ८४, साउदी अरबमा ६ सय ७४, मलेसियामा ४९, पोर्चुगलमा २९ नेपाली श्रमिकमा कोरोना संक्रमण भएको छ । यो संख्या भने श्रम गन्तव्य देशको मात्र हो । यूएईमा ९, साउदी अरबमा २, जापानमा १, बहराइन १ जनाको कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गएको एनआरएनए स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. संजीव सापकोटाले जानकारी दिए । हालसम्म श्रमिकसहित मृत्यु हुनेमा ७७ जना पुरुष र १९ जना महिला रहेको स्वास्थ्य समितिले जानकारी दिएको छ । “कोरोनाभाइरसका कारणले यो सातामात्र नेपालमा सहित थप १९ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्,” समितिको रिपोर्टमा भनिएको छ, “यसरी ज्यान गुमाउनेहरूको संख्यामा बेलायतमा १२, यूएईमा ३, साउदी अरबमा २ र नेपालमा २ रहेको छ ।”यस्तै, एनआरएनए स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सापकोटाका अनुसार नेपाल बाहेक विश्वभर ६ हजार ७ सय ८१ गैरआवासीय नेपालीहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । तीमध्य मध्यपूर्वमा ५३, अमेरिकामा २३, युरोप १९, एसियामा ५, प्रतिशतमा संक्रमणमा देखिएको छ । अष्ट्रेलियामा १ प्रतिशतभन्दा कममा संक्रमण देखिएको छ भने अफ्रिकी मुलुकमा रहेका नेपालीमा भने कोरोना संक्रमण देखिएको छैन ।
संक्रमित मध्ये ३५ प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएको अनुमान सो समितिले गरेको छ । संयोजक सापकोटाले कोरोना संक्रमणबाट बच्न उच्च सर्तकता अपनाउन नेपाली समुदायलाई अनुरोध गरेका छन । हालसम्म ११ देशमा गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्यान गएको छ भने बाँकी १९ देशमा रहेका नेपालीहरू कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट संक्रमित छन् ।